အရောင်ကောက်ယူသူ Tool ကိုထံမှလွယ်ကူစွာဟာသနှင့်အရောင်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူအေးမြဆွဲပုံများ - Scantegrity
အရောင်ကောက်ယူသူ Tool ကိုထံမှလွယ်ကူစွာဟာသနှင့်အရောင်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူအေးမြဆွဲပုံများ
အနုပညာမရှိဘဲမြေကြီးတပြင်! Eh ဖြစ်ပြီး, ပန်းချီ, ငါ့အကြိုက်ဆုံးအနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ဆေးထိုးခြင်းဖို့အခက်ခဲဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစတင်ရန်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအေးမြပုံကြမ်းသို့မဟုတ်စတင်ရန်ပန်းချီပင်လွယ်ကူသောပုံကြမ်းထွက်ရှာရန်လိုအပ်ပေမည်။ သင်သည်သင်၏လာမည့်ပန်းချီဘို့ကောင်းသောစိတ်ကူးများဖြစ်နိုင်သည်ကိုချစ်စရာရေးဆွဲတဲ့စည်းစူးစမ်းလေ့လာလျှင်ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ကောင်းလှ၏။ သင်မြင်, သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ပန်းချီ technique ကိုတစည်းလည်းမရှိ။ မဖော်ပြ, တကလှည့်ကွက်နှင့်အတူပန်းချီလျှောက်ထားရန်ကောင်းလှ၏။
Nice, ဤဆောင်းပါးကိုသင်အေးမြရေးဆွဲထံမှရိုးရှင်းသောသူတွေကိုအထိကြောင်း Tumblr ရေးဆွဲတစည်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်သည်မည်သည့်ပုံဆွဲအခြေစိုက်စခန်းပေါ်သူတို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ပန်းချီကားတစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာပုံပြင်ကိုပြောပြနိုင်သောပုံတစ်ပုံကိုဖန်တီးရန်ကြောင်းကိုတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်။ သငျသညျပတ္တူသမဂ္ဂပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပင်စိတ်ကူးယဉ်ရှုခင်းအပေါ်ဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ပန်းချီအနုပညာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပန်းချီအကြောင်းကိုကြားရတဲ့အခါသင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာ bursh, သုတ်ဆေး, palette ဓါး, ရေမြှုပ်နှင့်ဆေးမှုတ် rememeber ရမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပန်းချီလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ရလဒ်နှင့်ပန်းချီ object တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမ dout, သင်က၎င်း၏ပုံစံကိုထက်က၎င်း၏စတိုင်သို့မဟုတ်ပင် technique ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်ပန်းချီအနုပညာရပ်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်ဆိုနိုင်။ ဟုတ်ပါတယ်, ရေးခွအနုပညာနှင့်ရေနံပန်းချီပန်းချီနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ သငျသညျ arcylic ပန်းချီပန်းချီ technique ကိုတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်မျက်နှာသည်ကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျခေတ်သစ်တစ်ခုခုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ, acrylic tehnique လျှောက်ထားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
32 ပန်းချီ Tehcnique အမျိုးအစားများဘာတွေလဲ?
Tromp သည် L’oeil
နှင့်အညီ, ပန်းချီကားများ၏ Styles ဘာတွေလုပ်နေလဲ?
သတင်းအချက်အလက်အဘို့, သင်သိရှိရမည်ပန်းချီစတိုင်များနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အဆိုပါ firt တဦးတည်းအနောက်တိုင်းစတိုင်ဖြစ်ပြီး, ဒုတိယတစျခုအရှေ့ပိုင်းစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ Firt, ဒီမှာပန်းချီကားထဲမှာအနောက်တိုင်းစတိုင်များများ၏စာရင်းသည်:
Figurativism / ပုံဆောငျအနုပညာ
Art Deco – အမြင်အာရုံအနုပညာ, ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်း
သဘာဝအားဖြင့်မှုတ်သွင်း – •အနုပညာ Nouveau
အိန္ဒိယပန်းချီကားများ: Tanjore, မဂို, Rajasthani နှင့် Pattachitra
အရောင် လှုံ့ဆော်မှုတယ် မှအရောင်ကောက်ယူသူကိုသုံးပါ
ဘယ်နှစ်ယောက်သငျသညျသငျ၏ပန်းချီကားများအပေါ်တူညီတဲ့အရောင်သုံးပျင်းရအဘယ်သူနည်း ကောင်းပြီ, သငျသညျအရောင်ရွေးသူသငျသညျအဆင်းအရောင်အတွေးအခေါ်များထက်ပို 1.8 သန်းပေးနိုငျကွောငျးကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုပုံကိုမြင်သောအခါ, သင်ကသင်၏ပန်းချီလျှောက်ထားချင်သောအရောင်ကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ, ဆိုလို။ သင်အသုံးပြုချင်နေတဲ့အရောင်အမည်မနိုင်လျှင်မူကား, ဘာဖြစ်သွားမလဲ သငျသညျရှုပ်ထွေးရလိမ့်မည်!
သငျသညျအရောင်ရွေးသူကိုအသုံးပြုဖို့ပါလျှင် Nice, သငျသညျပုံ, ပုံရိပ်, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံအတွင်းမှအရောင်ဖွဲ့စည်းမှု၏စာရင်းကိုသိကြပါလိမ့်မယ်။ သတင်းအချက်အလက်အဘို့, tool ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်နှင့်အကြောင်းတစ်မိနစ်အဘို့အဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ သင်ရုံသင်အရောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချင်နှငျ့သငျပုံရဲ့အသေးစိတ်ကိုတှေ့လိမျ့မညျသောပုံရိပ်ကိုပြင်ဆင်ထားရန်ရှိသည်။ သငျသညျရှာတှေ့နိုငျသတင်းအချက်အလက်အချို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာအရောင်များ၏အမည်, RGB နှင့် hex ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အဘယ်အရာကိရိယာတခုကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
သငျသညျအရောင်ရွေးသူသုံးစွဲဖို့စောင့်ဆိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုပုံရသည်။ ဒါကြောင့်မည်သည့်နောက်ထပ်ကြောင့်မပါဘဲ, သင်အရောင်ရွေးသူကိုအသုံးပြုဖို့ရန် sequence ခြေလှမ်းများစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာပါ!
အဆင့် 1: သင့် Device ကိုတခုတခုအပေါ်မှာပုံရိပ်, ရုပ်ပုံ, ဒါမှမဟုတ်ပုံ Photograph Get
ပထမဦးစွာအရာပထမဦးဆုံးအသငျသညျပုံတစ်ပုံ, ရုပ်ပုံ, ဒါမှမဟုတ်သင်သည်အဘယ်သို့သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာဓာတ်ပုံအဖြစ်မခေါ်ရရန်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအငျတာနကျကနေ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အပြင်, သငျသညျလညျးအခြို့သောအရင်းအမြစ်ပေါ်မှာ Screenshot စတာတွေကိုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကင်မရာရှိပါကသင်သည်လည်းတိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထု၏ရုပ်ပုံယူနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် 2: အရောင်ကောက်ယူသူ Tool ကိုပေါ်ပုံရိပ်, ရုပ်ပုံ, ဒါမှမဟုတ်ပုံ Photograph Upload လုပ်ပါ
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်လျှင်, အောက်ပါ tool ကိုသင်ရုပ်ပုံ upload တင်မယ့်အာကာသပေးပါသည်။ ကောင်းပြီ, သင်သည်လက်ျာရုပ်ပုံ, ပုံရိပ်, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆင့် 3: ရုပ်ပုံ၏အချို့ဖျေါပွခကျြထားပါ
ပုံထဲကအပ်လုဒ်တင်ခြင်းပြီးနောက်အချို့ကိုသင်ဖော်ပြချက်ထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ Nice, သင်ရုံလယ်ပြင်ဖြည့်စွက်ရန်လေးစကားလုံးများကိုထည့်သွင်းရန်ရှိသည်။
အဆင့် 4: “Submit” Button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
နှင့်အညီ, သငျသညျကိုနောက်ခြေလှမ်းကိုဆက်လက်ရန်တင်ပြ button ကို click နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် 5: အရောင် Finder ကို၏ရလဒ်များ Explore
နောက်ဆုံးအနေနဲ့! သငျသညျပုံကိုတင်ပြပြီးပါပြီ။ အခုတော့တချို့အဆင်းအရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအဲဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျ hex, RGB, နှင့်အရောင်များ၏နာမည်ကဲ့သို့သောအသေးစိတ်အချို့သည်တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျသစ်ကိုအရောင်များကိုရှာတွေ့မှကွဲပြားခြားနားသောပုံများ, ပုံများ, သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံဆရာကို အသုံးပြု. အဆင့်ကိုပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!